BL Movies - MyanmarSub - Download Facebook Videos - GenFK.com
BL Movies - MyanmarSub
FB URL: https://www.facebook.com/blmoviesmyanmarsub/
ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းလားသိဝူး ယမ်းသေနတ်ကြီးနဲ့ လှမ်းပစ်နေတယ် Haha ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာတော့အမှန်ပဲ
ကိုယ့်ရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်း ခန့်ချောလေး ဘာတွေဆိုနေမှန်းမသိဘူး ချစ်တာပဲသိတယ်
The Driver (2017) ကားထဲက ခန့်ချောလေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Uke လေး သူ့နာမည်က Prama Imanotai ပါ သူ့ပုံတွေ Googleက Saveနဲ့ စိတ်တွေမနည်းထိန်းထားရတယ် အသည်းတွေယားလို့ အခု Gift ဖိုင်ထဲက ပုံလေးတွေ လိုချင်ရင် *****
Customized Companion (စကားသံတွေမပါတဲ့ OST)
Addicted (Webseries) မြန်မာစာတန်းထိုး အပိုင်း၅ Part-2 အပိုင်း၆ ခဏလေးစောင့်ပါအုံးနော် # Uploaded by :www.facebook.com/blmoviesmyanmarsub #Translator by :P'Arthit (BL Movies Myanmarsub) #Encoder by :P'Arthit (BL Movies Myanmarsub) #Movies credit :Boys Love Boys Series
Addicted (Webseries) မြန်မာစာတန်းထိုး အပိုင်း၅ Part-1 HD နဲ့ပြန်တင်ပေးတာမို့ File size ကြီးပြီး ပြန်ပြန်ကျသွားလို့ နှစ်ပိုင်းခွဲတင်လိုက်တာပါ Facebook ပေါ်တင်နေတာ သောကြာနေ့ကတည်းကပါ ပြန်ပြန်ကျသွားလို့ စောင့်နေရတဲ့ Friends တွေကိုတောင်းပန်ပါတယ် # Uploaded by :www.facebook.com/blmoviesmyanmarsub #Translator by :P'Arthit (BL Movies Myanmarsub) #Encoder by :P'Arthit (BL Movies Myanmarsub) #Movies credit :Boys Love Boys Series
Addicted (web series) (မြန်မာစာတန်းထိုး) အပိုင်း ၅ Uploaded by :www.facebook.com/blmoviesmyanmarsub #Translator by: P' Arthit (BL Movies- Myanmarsub) #Like & Share!
Addicted (web series) (မြန်မာစာတန်းထိုး) အပိုင်း ၄ Uploaded by :www.facebook.com/blmoviesmyanmarsub #Translater by: BL Movies- Myanmarsub #Like & Share!
Addicted (web series) (မြန်မာစာတန်းထိုး) အပိုင်း ၃ Uploaded by :www.facebook.com/blmoviesmyanmarsub #Translater by: BL Movies- Myanmarsub #Like & Share!
Addicted (web series) (မြန်မာစာတန်းထိုး) အပိုင်း ၂ Uploaded by :www.facebook.com/blmoviesmyanmarsub #Translater by: BL Movies- Myanmarsub #Like & Share!
Addicted (မြန်မာစာတန်းထိုး) Part1 (B) uploaded by :www.facebook.com/blmoviesmyanmarsub
Addicted (web series) မြန်မာစာတန်းထိုး Part 1 (A) 2016ကထွက်ခဲ့ပြီးတော့ အတော်လေးကို နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကားလေးပါ File size များသွားတဲ့အတွက် အပိုင်းခွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘာသာပြန်အမှားယွင်းများရှိခဲ့ရင် သည်းခံပြီးကြည့်ပေးပါ လို့ကြိုပြောပါရစေ